A na - akpọ Gilalite quartz dị ka medusa quartz ma ọ bụ Paraiba quartz - vidiyo
Buyzụta klọọkụ gilalite bapụtara na ụlọ ahịa anyị
A na-akpọkarị Gilalite quartz dị ka medusa quartz ma ọ bụ Paraiba quartz n'ihi agba nke ihe gụnyere ma bụrụkwa mpaghara dị na Brazil ebe a na-egwu ya.
Gilalite bụ ọla kọpa silicate nke nwere kemịkal kemịkal nke Cu5Si6O17 · 7.
Ọ na - eme dị ka oge nlọghachi azụ metamorphic dị na nkwụnye calc-silicate na sulfide skarn. Ọ na - eme dị ka ihe ndị na - akpata nkụji na nkụji metụtara kristal diopside. A na-ahụkarị ya n'ụdị spherules nke eriri radial.
Ebu ụzọ kọwaa ya maka ihe mere na Ngwunye ọla kọpa nke ọla dị na Gila County, Arizona na 1980 yana akụ mmiri. Ọ na - enweta aha ya site na mpaghara a. A kọwokwa site na District Goodsprings, Clark County, Nevada; Juazeiro do Norte, Ceara State, Brazil na mpaghara slag na Lavrion District, Attica, Greece.
Quartz bụ mineral dị egwu, nke mejupụtara silicon na atom oxygen. A jikọtara atoms na usoro na-aga n'ihu nke SiO4 silicon – oxygen tetrahedra, ebe ikuku oxygen na-ekerịta n'etiti tetrahedra abụọ, na-enye usoro kemịkal nke SiO2. Quartz bụ mineral nke abụọ kachasị akụ na ụba ụwa, na-akpata feldspar.
Quartz dị n'ụdị abụọ, α-quartz nkịtị na β-quartz dị elu, ha abụọ nwere chiral. Mgbanwe site na α-quartz ruo β-quartz na-ewere ọnọdụ na mberede na 573 Celsius. Ebe mgbanwe ahụ na-enwe mgbanwe dị ukwuu na oke olu, ọ nwere ike ime ka mmebi nke okwute ma ọ bụ oke okwute nke na-agafe ọnọdụ okpomọkụ a.